कोरोनाका जस्ता देखिने लक्षणहरू मानसिक रोगका पनि हुन सक्छन् ? – Sodhpatra
कोरोनाका जस्ता देखिने लक्षणहरू मानसिक रोगका पनि हुन सक्छन् ?
मानसिक रोगमा शारीरिक लक्षणहरू
प्रकाशित : २१ भाद्र २०७८, सोमबार ०८:३२ September 6, 2021
गोपाल ढकाल, मनोविद् : कोभिड – १९ महामारीको समय सबैको लागि तनावपूर्ण समय हो । विपत्तिको बेला सामान्य डर , चिन्ता, बेचैनी, छटपटी र तनाव हुनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अवस्थामा मानिसहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रतिक्रिया नै मानिन्छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला मानसिक तनावका विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन् । केही समयपछि धेरै जसोमा तनावका यस्ता लक्षणहरू बिस्तारै आफै कम भएर जान्छन् । तर केहीमा भने मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम बढेर जान्छ ।
तनावपूर्ण वा असहज अवस्थामा देखिने यस्ता लक्षणहरू सामान्य र स्वाभाविक लक्षणहरू हुन । तर यस्ता लक्षणहरू लामो समयसम्म रहिरहे भने मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम बढ्छ । यस्ता समस्याले आफ्नो दैनिक व्यवहार , व्यक्तित्व , सम्बन्ध , सोच , बिचार , भावना आदिमा असर पुर्‍याउन थाल्यो भने चाहिँ मानसिक रोगको रूपमा लिनुपर्छ ।
मानसिक तनाव , मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक लक्षणहरू देखिन्छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणको समयमा एन्जाईटी डिसअडर्स ( डर , चिन्ता ,बेचैनी ), प्यानिक डिसअडर्स (एक्कासि बिना कारण उत्पन्न हुने अत्यधिक त्रास ) , कन्भर्सन डिसअडर्स(डर, त्रास , तनावको कारणले देखिने मनोवैज्ञानिक समस्या) , मानसिक आघात (पिडादायक घटना पछि उत्पन्न हुने एक किसिमको मानसिक रोग ) , ए क्युट स्ट्रेस डिसअडर्स (तत्कालै देखा पर्ने तनाव जन्य समस्या ), जाँड रक्सी तथा लागू प्रदार्थको कुलत , एडजस्टमेन्ट डिसअडर्स ( समायोजनको समस्या , परिस्थितिसँग जुझ्न नसकिरहेको अवस्था) , डिप्रेसन ( नैरस्यता, दिक्दारीपन ), सामाजिक सञ्जालको लत , अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअडर्स ( एउटै सोच वा बिचार आइरहने तथा एउटै कार्य लगातार धेरै पटक दोहोर्‍याई रहने मानसिक रोग ) तथा अन्य चिन्ता जन्य मानसिक रोगहरूको जोखिम बढेर जान्छ । यी मानसिक रोगहरूमा पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक लक्षणहरू देखिन्छन् ।
जस्तो: टाउको दुख्ने,पेट दुख्ने, हातखुट्टा कट्कटी खाने, झम्झमाउने , रिँगटा लाग्ने, कब्जियत वा पखाला लाग्ने ,पेट फुल्ने वा पेट ढुस्स हुने , उल्टी हुने, वाकवाकी लाग्ने,भोक नलाग्ने , खानाको स्वाद मीठो नहुने, छाती भारी हुने, छाती दुख्ने , छाती पोल्ने , मुटु चस्किने,मुटु ढुक् ढुक् हुने, जिउ तात्ने वा चिसो हुने जस्ता शारीरिक लक्षणहरू मानसिक रोगमा देखिन्छन् ।
यसै गरी निन्द्रा नलाग्ने, शरीरमा कमजोरी महसुस हुने, थकाइ लाग्ने, बेहोस हुने, पसिना आउने , सास फुल्ने, स्वाँ स्वाँ हुने , घाँटी खसखसाउने, सुक्ने, खोकी लाग्ने , हाई हाई आउने , बाडुली लाग्ने आदि शारीरिक लक्षणहरू मनोरोगमा पनि देखिन सक्छन् । अझ प्यानिक डिसअडर्समा त श्वास नै रोकिए झैँ हुने , श्वास फेर्न कठिनाइ महसुस हुने , अहिल्यै मरिएला जस्तो गरी पीडा र छटपटीको महसुस हुन्छ ।
यस्ता लक्षणहरू देखिँदा आफूमा कोभिड – १९ रोग पो लाग्यो कि भनेर धेरै व्यक्तिहरू भयभीत हुने गरेको पनि देखिन्छ । मानसिक रोगका कारण यस्ता लक्षणहरू देखिने भएकाले शारीरिक परीक्षण गर्दा भने शरीरमा कुनै पनि खराबी देखिँदैन ।
तनाव वा मानसिक रोगका कारण हुने यस्ता शारीरिक लक्षणहरू महसुस गरी आफूलाई कोरोना भाईसर सङ्क्रमण भयो भन्दै परीक्षणका लागि अस्पताल धाउनेहरू पनि धेरै हुन सक्छन् ।
एन्जाईटी डिसअडर्स , प्यानिक डिसअडर्स तथा अन्य चिन्ता जन्य मानसिक रोगमा बिरामीलाई एक पटक परीक्षण गर्दा चित नबुझ्न पनि सक्छ । उनीहरू आफू कोरोना भाईसरले सङ्क्रमित भएको आशंमा गरी पटक पटक परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्न सक्छन् ।
कोभिड – १९ हुँदा ज्वरो आउने , सुख्खा खोकी लाग्ने , सास छोटो हुने वा स्याँस्याँ हुने,श्वास फेर्न कठिनाइ हुने , कोरोना भाइरसका केही मुख्य लक्षण हुन् ।
साथै कोभिड – १९ का केही बिरामीमा थकान कमजोरी,टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, घाँटी दुख्ने, स्वाद र बास्ना हराउने गरेको पनि पाइएको छ। केही बिरामीमा घ्राण शक्ति अर्थात् सुँघ्ने क्षमता पनि शिथिल भएको पाइएको छ ।
उल्टी हुने, पेट दुख्ने र पाचन प्रणालीमा गडबडी हुने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन् । मानसिक द्धिविधामा पर्ने, निन्द्रा नलाग्ने , स्मरण शक्तिमा कमी , मुटुको धड्कन बढेन, मुटुको मांसपेशी दुख्ने/पोल्ने , हाछ्यु आउने, घाँटी खसखस हुने र बेचैनी वा छटपटी हुने जस्ता थप लक्षणहरू नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूमा देखिएको छ ।
कसैमा कोभिड- १९ का जस्ता लक्षणहरू देखिएमा वा आफू सङ्क्रमित भएको आशङ्का लागेमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएमा यी लक्षणहरू मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगका लक्षणहरू हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मनोरोग विशेषज्ञ , मनोविद् वा मनोपरामर्श दातालाई भेट्नुपर्छ ।
कोभिड -१९ वा शारीरिक रोग लाग्दा यसका लक्षणहरू सीमित हुन्छन् । कोभिड – १९ बाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले प्राय समान किसिमको लक्षण महसुस गर्छन् । तर मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा देखिने शारीरिक लक्षणहरू असीमित हुन हुन्छन् । सबै अङ्ग वा प्रणालीहरूमा लक्षणहरू देखिन सक्छन् ।
मानसिक रोगमा देखिने शारीरिक लक्षण छोटो समयको लागि हुन्छ र यी लक्षणहरू परिवर्तन भई रहन्छन् । तर शारीरिक रोगमा भने निरन्तर २४ औ घण्टा जसो एकै किसिमका लक्षणहरू रहिरहन्छन् ।
कोभिड – १९ मा प्राय लक्षणहरू शारीरिक किसिमका हुन्छन् । मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगमा भने शारीरिक लक्षणहरूका साथसाथै मनसँग सम्बन्धी लक्षणहरू जस्तो: डर लाग्ने , चिन्ता लाग्ने, मनमा कुरा खेल्ने , मन दुखी हुने , पिर पर्ने आदि जस्ता लक्षणहरू देखीन्छन् ।
यसका साथै मनोरोगमा सम्बन्धसँग सम्बन्धी लक्षणहरू पनि देखिन्छन् । जस्तो: सम्बन्ध बिग्रँदै जाने , जिद्दी पना, अरूलाई विश्वास नगर्ने , अरूसँग टाढिँदै जाने आदि ।
निष्कर्षमा शरीर र मन एक अर्काका परिपूरक छन् । मनमा समस्या आउँदा वा रोग लाग्दा शारीरिक लक्षणहरू पनि देखिन्छन् । यसै गरी शरीरमा रोग लाग्दा यसले मनमा पनि असर पुर्‍याउँछ ।
निषेधाज्ञाको अवधि भरि फोन मार्फत निःशुल्क मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था मार्क नेपालले गरेको छ । जसको लागि ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । ( लेखक मनोविद् हुन् । उनी मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् । )